Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) - Releases & Announcements
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံနိုင်ခြင်း(Release No:10/2016)
မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) သည် ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် လက်ရှိဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ သုံးပုံ တစ်ပုံသော ဦးရေသည် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း အပိုဒ်(၈၆)အရ နှုတ်ထွက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းနှုတ်ထွက်သွားသည့် လစ်လပ်ဒါရိုက်တာများ၏ နေရာတွင် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအပိုဒ် (၇၅) အရ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်(MAPCO)၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင် များ ကြွရောက်ချီးမြှင့်နိုင်ပါရန် ကြိုတင် အသိပေးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
MAPCO - SK Networks Company တို့ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှင့် သီးနှံအခြောက်ခံစက် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား (Release No:08/2016)
MAPCO နှင့် SK Networks Company တို့အကြား မြန်မာ့လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မဟာဗျုဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ နှင့် သီးနှံအခြောက်ခံစက် (Grain Dryer)များ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ၊ Park Royal Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးစပါးခွံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း (Release No: 07/2016)
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ နှင့် ဂျပန်ပြည်သူတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ YANMAR နှင့် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေး အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း လီမိတက် (MAPCO) ၏ နေပြည်တော် အဆင့်မြင့်ဆန်စက်နှင့် Agribusiness Service Center (Naypyitaw ASC) တွင် စပါးခွံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဂျပန်နည်းပညာ (4th Generation-Waste-to-Energy Technology) အဖြစ် ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအခမ်းအနားကို(၁၁.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ MAPCO ဆန်စက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Release on Rice Husk Gasification & Power Generation Project (Release No.06/2016)
Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd (MAPCO) collaborates with the Japanese consortium led by Yanmar, consisting of Chiyoda & Public Works, Chiyoda System Technology and Kanso Techno for the introduction of Fourth Generation Rice Husk Gasification and Power Generation Technology in MAPCO’s Naypyitaw Rice Complex in Naypyitaw, Myanmar. The Project’s groundbreaking ceremony was held on 11th October, 2016, at the Project Site in Naypyitaw. It was attended by Union Minister Dr.Aung Thu, from the Ministry of Agriculture, Livestock & Irrigation, senior officials from Ministry of Natural Resources & Environment Conservation, Ministry of Electricity & Energy, Ministry of Industry and Naypyitaw Council. The Minister gave the Opening Remarks and representatives from YANMAR and MAPCO also gave remarks.
MAPCO Naypyitaw Co.Ltd အား ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း (Release No: 05/2016)
MAPCO ၏ နေပြည်တော်တွင်ရှိသော ဆန်စက်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်ဖြစ်သည့် 0ne Project One Company ဖြစ်ခြင်းဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ ပိုမိုရှင်းလင်းတိကျပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်/စံညွှန်းများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အတွက်လည်းကောင်း MAPCO Naypyitaw Co.,Ltd ကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကော်မတီများ ညွှန်ကြားမှုဌာနခွင့်ပြုချက် အမှတ် ၁၈၂၃ / ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ရက) ဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အစုရှယ်ယာအသစ် ထပ်မံ ထုတ်ဝေမည့် အစီအစဉ် ကြေညာချက် (Release No: 04/2016)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) သည် (၁.၈.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ အစုရှယ်ယာ ရှင်ပေါင်း(၁၄၄၄)၊ ထည့်ဝင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၆.၄ ဘီလီယံ) ဖြင့် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။